Ngenxa yokunganyangeki ivangeli uba uPawulos kwafuneka asabe, aze abhale iileta ukuze bakhuthaze ibandla xa ngu uTimoti uye weva ukuzingisa kwabo, ukholo nothando.
Siyakuba - imfundiso ebalulekileyo
Abantu abaninzi uyiyeke ayobe njengento imfundiso ebalulekileyo okanye ukufundisa. Amanye amaKristu aphike nje, okanye kuthetha ukuba kuphela ziqondwe ngokomfuziselo okanye nangokuvumelana. Abanye bakholelwa ukuba ayobe nje kulungile, kodwa ukuba labasibekela yi iimfundiso ezibalulekileyo ezifana noBathathu Emnye okanye ukubhaptizwa.
Ukusuka apho, uPawulos wamisa ibandla ade ubhala ezi leta, kuba iinyanga malunga 6-12. Ngoko ke ngamanye amazwi ibandla oselula kakhulu ukuba uPawulos ubhala ngayo. Kodwa kwanokuba aba bantu baba kahle entsha elukholweni, kufihlwa okanye engaqukwanga uPawulos ukuba afundise okanye ukuthetha ngokubuya kukaYesu.
Sele kwisahluko sokuqala apho uPawulos ukhankanya iimfundiso angundoqo uMoya oyiNgcwele (ivesi 5) okanye kwiNdibano inguquko (ivesi 9), ukuze ngelixa yena ukhankanya ukuba ithemba ibandla nolindelo, ezizezi ukubuya kukaYesu (v 10).
Bazalwa ngexesha le-intshutshiso
Ibandla eTesalonika wazalwa waza wahlala intshutshiso rhoqo ngenxa yokholo lwabo. Abakubona intshutshiso efanayo ngamaYuda, ukuba uYesu nabaprofeti kwenzeka ngaphambili (v14).
Le ncwadi i ukhuthazo ukuze ibandla ukuba aqhubeke sihamba ngokholo kwaye ukuzingisa kwabo eNkosini. Ebudeni intshutshiso enkulu nokubandezeleka bafumana iindaba ezilungileyo, yaye baguqukile bezigodo zakhe. Ngoku ke wadlulisela, Ndikhoyo, sanqula omnye ukuphela koThixo oyinyaniso.
Ukuba sifuna ukuba ukucacisa uze uchaze ukuba yintoni na ayobe ke, kukho nje inamacala namaqela amaninzi iinkalo omnye chaza:
Okokuqala, ayobe i ekufundeni ebalulekileyo kufuneka ibe yinxalenye isiseko leNdibano kwaye beshumayela. Kwakhona isiganeko ukuba owahlukileyo ngokunxulumene kaYesu ebonakalayo eze emhlabeni, kwaye endaweni inkcazelo uNdikhoyo wehlela ezulwini ukuya kuzithatha, ukudideka ibandla lakhe yedwa. UXwilo naye Ukuhlangana abo sibathandayo, ngubani ngaxeshanye ayobe kwabafileyo.
Akukho izithembiso pre-yokufikelela malunga ayobe nebandla ithetha ukuthi "kusondela" okanye ehlobene. Oku kuthetha ukuba ibandla kufuneka bahlale elindele rhoqo yeNkosi, kwaye ukuba uYesu wayeza kuzisa thina ekhaya. Nangona uchazwa ngasentla kunye nakuzo njengoko imbandezelo enkulu, nto leyo ithetha ukuba yinxalenye yenkqubo ukuba abakhwetha kwaye iqala imini yeNkosi okanye nembandezelo. Ngenye imini uYehova unika isibambiso ibandla ukuba babe yinxalenye.
UXwilo - HARPAZO
1 Tesalonika 4: 16-17 - Kuba xa umyalelo elikhulu, ilizwi lesiphatha-zithunywa, inexilongo likaThixo, iNkosi ngokwayo iya kuhla emazulwini. Kwaye kuphela abafele kuKristu bavuke. Emva koko thina babudlayo ubomi, basaseleyo, sixwilelwe phezulu (harpazo) emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni. Kwaye ke soze siya kuba kunye neNkosi.
Igama elithi "ayobe" ivela kule vesi yeBhayibhile Liguqulwe lithatyathwa kwigama lesiGrike elithi 'harpazo "ukuba" kubanjiswa phezulu. " Eli gama "harpazo" ikhankanywa kuphela izihlandlo ezili-13 kwi-NT kwaye isetyenziswa kuphela ngo-1 Vatesalonika 4 ngokunxulumene ayobe ibandla.
Kulindeleke yenza umtshakazi ulungiselela, kwaye baphila ubomi engcwele, yaye abelwe umkhwenyana yakhe elandelayo. Kwakhona kudala imfuno a lwesintu ezidakileyo kweNkosi ufuna ukufikelela kunye nothando lwakhe namandla okusindisa. Lenza le ndoda elungileyo kunye eziphathekayo kuthetha ngaphantsi ngokunxulumene inyaniso yokomoya ukuba amawaka abantu besehlelwa yonke imihla xa beya kube ngunaphakade ngaphandle kuThixo kungekho nethemba.
Kwangaxesha nye, ngasekupheleni kweminyaka yee-1800, xa uYehova kwakhona waphakamisa zezifundo ayobe ezinxulumene, ihlabathi zafumana enye amaxesha kakhulu namhlanje imbali wevangeli and kwevangeli. Ngaxeshanye ilizwi lesiprofeto baba ephila, wayitshisa ngomlilo iindaba ezilungileyo ehlabathini lonke.
Iileta ibandla eTesalonika yileta sokugqibela kwimbali kaPawulos. Ngoko sinokulindela ukuba uPawulos zombini Bafundise ukhankanye iziganeko ezibalulekileyo ukuba ayobe, lo IsiPhawuli Umchasi nembandezelo.
2 KwabaseTesalonika naye omnye yeleta ixakayo kwi-NT, ngokunxulumene nexesha kwindawo ayobe ibandla likaThixo.
An wendawo engumzekelo
Ngeendlela ezininzi, ibandla wamisela umzekelo amanye amakholwa (1 Tesalonika 1: 8). Yaba ibandla eyayihlala elindele rhoqo yeNkosi. Bona baguqukile zezithixo, walinda ngoku uYesu isityhilelo esivela ezulwini (1 Tesalonika 1:10).
Kwileta yakhe yokuqala ukuba uPawulos usibongoza iNdibano ukuqhubeka ukwenza imisebenzi yabo baze baphile ubomi obuqhelekileyo, kwangaxeshanye ukuba ebilindile eNkosini (4: 11-12). UMthuthuzeli kubo ngokuxelela ukuba ndobuya ndinibone izalamane abasele beza ekhaya phambi kwethu, xa kuvela ngaxeshanye kwabafileyo ayobe kobomi.
ncwadi yesibini kaPawulos
ncwadi yesibini uPawulos kubhalwe malunga neenyanga ezintandathu kamva kunesiqalo. Ubhalela ibandla ukuze alungise aze alungise amarhe kunye neemfundiso zobuxoki sibambelele kwiNdibano.
Ibandla luvalo yaye bedidekile ngokuphathelele imini yeNkosi, kwaye domstid eya kuza phezu kwehlabathi. Le amarhe neleta nezityholo kuPawulos, wacinga ngoku ibandla ukuba sele ngaphakathi kwale domstid leyo nayo imbandezelo.
2 Tesalonika 2: 1-2 - Xa kuziwa iNkosi yethu uYesu Kristu, nokuhlanganiselwa kwethu Kwahlanganisana kuye, siyanicela, bazalwana, ukuba ukuphulukana ngequbuliso uzibambile yakho ningabi navuso, nangantoni na ngomoya okanye ngamazwi okanye ncwadi, olubonakala ngathi kuthi kwaye isekelwe ifikile imini yeNkosi.
1 Tesalonika 5: 2 - Ukuba amaxesha namathuba, bazalwana, akufuneki nganto ukuba ndinibhalele. Niyazi kakuhle kakhulu, ukuba imini yeNkosi, njengesela ebusuku. Xa abantu besithi, "Luxolo nokunqaba," ngoko ke kutshatyalaliswa ngequbuliso iintlungu ucaca umfazi omithiyo, yaye akayi kusinda. Ke nina, bazalwana, anisebumnyameni, ukuba imini leyo iniqubule njengesela.
Okokuqala, kubalulekile ukucacisa oko ngokwenene imini yeNkosi na. Abantu abaninzi benza yaye libhekisela imini yeNkosi, njengoko imini onqongopheleyo ezithile iiyure ezingama-24, nto leyo ethatha indawo ekupheleni kwembandezelo xa uYesu ukubuya ebonakalayo. Ngoko ke kuthetha ukuba imini yeNkosi noxhwilo kuyahambisana kwaye uyacima kwesinye.
Mhlawumbi le vesi kakhulu wacaphula nje-1 kwabaseTesalonika 5: 2, ekhankanya ayobe ngokunxulumene ne ngemini yeNkosi. Njengoko imini yeNkosi ngendlela efanayo ukuba uYesu uza njenge "njengesela ebusuku" ukuba lebhokisi wena kaninzi babhidanisa ezi ziganeko zibini.
Kodwa uphengululo ezinye iivesi zeBhayibhile ezithetha iMini yeNkosi ibonisa ukuba ayithethi nje kuphela ubheke ngamini-nye, kodwa ngexesha lomgwebo eyenzelwe Bembandezelo, uYesu ukubuya ebonakalayo kunye Millennium.
A isihloko jikelele
Zombini ezi ndinyana zeBhayibhile kunye into umxholo ababesoloko NT kukuba icawa akukho umiselwe ukuba abandezeleke ingqumbo, kodwa endaweni abasindiswayo walondoloza kulo.
Igama elithi 'ukusuka' (ek) akafuni ukuya kuzo, kodwa endaweni ukuqhela nabani na okanye nantoni na ngokoqobo. UYesu usebenzisa igama elifanayo xa ufundisa ukuba "ukususa umqadi okwelakho iliso" kuMateyu 7: 5 Le umqadi okanye imbande ke isuswe emzimbeni imini kude, kwaye akukho akusathethwa iliso.
Ukuba siye ezi zithembiso zisuswe yaye alondolozwe kuyo ingqumbo kaThixo, njani ibandla kubakho ebudeni bembandezelo?
Kusindiswa ngaye kuyo ingqumbo
Phezulu 19:15 - The wemikhosi zezulu zamlandela phezu amahashe amhlophe, kwaye banxiba kwilinen entle emhlophe, ecocekileyo. Kwaye ephuma emlonyeni wakhe, weza ikrele elibukhali, ukuze azithi qwaka ngalo iintlanga, yena uya kuzalusa ngentonga yentsimbi; yena inyathele uThixo, uSomandla, yomsindo neyengqumbo (orge) sewayini
Ekupheleni kwembandezelo igqibe ingqumbo kaThixo, yaye sihlangabezana yona kwixesha lokugqibela xa uYesu uza zokoyisa ubufumane oyise iintshaba zakhe eArmagedon.
Ukuba ibandla na isithembiso yokuba zigcinwe kule domstid ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni, ngoko ke kwacaca ukuba iCawe akakwazi kuhlala emhlabeni xa itywina lokuqala yaphulwe. UPawulos iyakungqina oku kamva Tesalonika 2, apho efundisa iziganeko kuthi kuqala phambi kokuba le domstid uya phezu komhlaba.
2 Tesalonika 2: 3 - Makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo. Kuba, kuqala, inkunkuma kufuneka eze kwaye umntu wesono, unyana wotshabalalo; ekuhleni beze phambili
UPawulos ufundisa ibandla ngengxabano ezibalulekileyo izigqibo, eyile ukuba ibandla asinakulindela ukuba imini yeNkosi (imbandezelo) wayeza kufika ngaphambi kokuba zenzeke iziganeko ezintathu ezibalulekileyo:
Inkunkuma (apostasia) kufuneka eze, kulowo uphethe emva kufuneka beze kule ndawo, kwaye laglösthetens umntu (Umchasi) beze phambili ngokuphandle (Rev 6: 1)
Intsingiselo apostasia elithi
Igama ngesiGrike iguqulelwe inkunkuma, ubuqhophololo kunye neenkani elithi "apostasia". Isibizo "apostasia" lisuka kwisenzi "afistämi" ogama huvudbetydning ukuba "ukuhamba" okanye "ukuba into ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye." Eli gama lisetyenziswa ingakumbi ngokunxulumene nayo nayiphi na ehamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, okanye ukuba ahambe okanye yahlukile umntu.
Sifumana apostasia igama kabini kuphela NT, apho enye kwiZenzo 21:21 apho ethetha "kubalahla uMoses," okanye ukuwexuka kuMoses. Ngoxa apostasia lesibizo kunqabile kwi-NT, kukho isenzi afistämi ukuba ilizwi isuselwe izihlandlo ezilishumi elinesihlanu. Kuphela kukwiimeko amathathu libhekisela uwexuko zonqulo. (1 Tim.1, Heb 3:12 no 2 Tim 2: 9).
Kotolikerna wasebenzisa le nguqulelo ukwalatha i "inkunkuma" landulelwe yiloo nto-1500 ngenxa yoHlaziyo.
Kwelinye icala, ngo-1611 xa King James iBhayibhile yapapashwa abaguquleli ehlaziyiweyo ke ukuba iinguqulelo ezidlulileyo ukusuka banciphe ukwalatha yamaKatolika neemfundiso zayo njengoko uwexuko olukhulu. It Ngaloo ukufunda okanye intsingiselo yegama apostasia abakhetha oku, kodwa Umyalelo yamaKatolika iCawa.
UXwilo - isiganeko esithile
Yintoni kanye njani uPawulos xa efundisa isiganeko esithile oluya kuqhubeka nje ngaphambi kwembandezelo?
apostasia Greek ezizezi abe inqaku article (oko kukuthi igama lesiGrike ngesiqhelo hayi) eyenza uPawulos ubonisa ukuba isiganeko kwangaphambili, kungekhona into eyenzeka emva kwexesha.
2 Tesalonika 2: 6-7 - Niyazi ukuba kunjani ngoku eyayimbambe emva ngoko ke uya kuvela kuphela xa ixesha wakhe. Kakade ke, imfihlelo yokuchasana nomthetho isebenza. Lowo ngoku embilinini yaso iya kususwa kuphela emke lowo umbambezeleyo.
Ivesi 4-8 ye sahluko sinika ezi Kristu, nalowo uphethe naye emva kangangokuba akakwazi abonakale phambi kwexesha lakhe. Namhlanje, thina ubhale 2014, yaye sinako ukuqinisekisa ukuba nokuba yena lowo uzibambileyo emva isekhona apha xa umchasi-alikafiki phambili.
UMoya oyiNgcwele uya kuqhubeka ukusebenza ebantwini ngayo imbandezelo, kodwa mzuzu uppryckelsens ngaphezulu. Ngoko ke, sibona akusekho uMoya oyiNgcwele zimelwe kwiSahluko 3 kwiNcwadi yeSityhilelo nangaphaya. Oonobumba ukuba amabandla asixhenxe, siva la mazwi: Lowo uneendlebe zokuva, makayive into ayithethayo uMoya kuwo amabandla. Emva kwiSahluko 3, nto leyo ayobe iNdibano kukuba akusekho uMoya oyiNgcwele othetha. ISityhilelo 13: 9 - Lowo uneendlebe zokuva, makeve. Yaye uMoya oyiNgcwele okubangelwa usindiso ezahlukeneyo umyalezo umgwebo kubantu ngayo imbandezelo, ngoko kuya endaweni kwenziwa ziingelosi. (Rev 14: 6-7).
Xa iNdibano siye ubanjwe uMoya oyiNgcwele akanayo nendawo ukusebenza ukusuka ngaphezulu koko iNdibano kuphela itempile uThixo uyazi namhlanje. (1 3:16). Icawa kuphela ukuba imelwe imbandezelo skökoförsamlingen, kwaye wanga uMoya oyiNgcwele akubi usebenza okanye ezivela ngaphandle.
Ayobe 2 Tesalonika 2:13
2 Tesalonika 2:13 - Kodwa simelwe ukuba simbulele uThixo ngawo onke amaxesha ngenxa yenu bazalwana bathandiweyo yiNkosi, ukuba uThixo kwasekuqalekeni waninyulela ukusindiswa, ngokungcwalisa koMoya nokukholwa yinyaniso.
Eng Trans. "Kodwa sifanele ukuba Bulela uThixo ngawo onke amaxesha ngenxa yenu, bazalwana bathandiweyo yiNkosi, Good Ngenxa wanyula, isiqhamo yokuqala, kuba ukukhululwa na, ngokungcwalisa koMoya nokukholwa yinyaniso."
Siyakwazi ukubona ukuba intsingiselo eli gama kunokuba zombini usindiso yokomoya, kwaye usindiso wenyama ingozi okwexeshana okanye iimeko. I GT ikakhulu ingozi ebonakalayo lo gama uninzi NT limele ngengqiqo wosindiso ngokomoya.
ITestamente Entsha yabhalwa kwisithuba esimalunga neminyaka eli-60, xa ngababhali ezahlukeneyo. Intsingiselo yegama wosindiso (soteria) Inokuchazwa zombini ngokunxulumene nexesha le kubhalwe kuyo kwathiwa, kwaye apho umbhali wasebenzisa igama.
isahluko ngalinye Tesalonika 1 no-2 badize naluphi na kuthetha ukubuya kukaYesu, nokufundisa sokugqibela kwimbali nguPawulos. Ngoko ke namanye amagama anxulumene ukukholelwa ukuba usindiso uPawulos ubhekisela ngo-2 Tesalonika 2:13, kwakhona uchaza kwaye phambili nesihloko, uPawulos ifundisa.
Uphengululo-2 Tesalonika isahluko 2 ubonisa ukuba sahluko inikeza:
1. A isilumkiso (vs. 1-3)
3. ongenamthetho kuvela (vs. 3-5)
4. ebambe (vs. 5-7)
5. Umchasi IsiPhawuli kunye ukufika (vs. 8-9)
6. wenkohliso nenkohliso abantu (ivesi 10-12)
7. A Okuvuyisayo Nkosi, kunye umnxeba (vs. 13-15)